नयाँ अनुसन्धान अनुसार, महिला सम्बन्धविच्छेद स्थिति प्रारम्भ गर्न बढी सम्भावना हुन्छ। तर, यो व्यवस्था बिहे नभएको सम्बन्ध लागि काम गर्दैन। एक मानिस र एक महिला एक विवाह प्रमाणपत्र छैनन् भने, खाली को initiators या त पक्ष कार्य गर्न सक्छ। यो किन छ? बुझ्न प्रयास गर्नुहोस्।
तर पहिलो, क्रममा निराधार हुँदैन, हठी तथ्याङ्क तथ्याङ्कले ध्वनि। फलस्वरूप, सामाजिक सर्वेक्षण महिलाहरु प्रारम्भ कि divorces को 69% प्रकट गर्नुभयो। अध्ययन 2262 वयस्क, पहिले नै असफल विवाह थियो जो पछि संलग्न। तथ्याङ्क डाटा 2009 देखि 2015 को लागि अवधिमा संकलित थिए। यो पुरुष उत्तरदाताओं अवस्थामा को 31 प्रतिशत मा छोडपत्र लागि दायर कि गणना गर्न सजिलो छ। हामी भने, यो लागू हुँदैन आधिकारिक जोडे दर्ता गरिएको छैन। के आधुनिक महिला एक औपचारिक विवाहको लागि त भयानक छ?
Sociologists र मनोवैज्ञानिक त्यसैले यो घटना व्याख्या। आधुनिक पश्चिमी महिला छैन मानिसहरू निर्भर अब छ। त्यो, एक क्यारियर बनाउछ एक राम्रो विचार कमाता त्यसैले, विवाहको लागि उच्च आशा छ। वास्तविकता मा, महिलाहरु अक्सर एउटै परिवारका मान संग सामना गर्दै छन्। पति पत्नीको घरेलू घरधन्दा गरिरहेको को लोड, र छोराछोरीको पालनपोषण लागि प्राथमिक जिम्मेवारी काँध। असह्य भावनात्मक र शारीरिक व्यायाम कम सन्तोषजनक सम्बन्ध आधिकारिक गर्न जान्छ।
सम्बन्ध को पुरानो मोडेल
शायद सबै आधुनिक प्रेमीहरूको किन सम्बन्ध legitimize गर्न खोज्नु हो। आखिर, यस्तो सम्बन्ध वर्तमान वास्तविकताहरु आदर थप लचिलो छ। लिङ्ग विवाहको समय बानी नींव को अगाडी समानता को क्षेत्र मा पश्चिमी समाज को विशाल प्रगति। थप र महिला विगतका vestiges मुक्त बन्न सपना।
तर तपाईं अझै पनि पतिको नाम लिन र काम मा परिवर्तन पछि खाने खाना पकाउन? शायद यो एउटा सरकारी विवाह मा विचारै पुनर्विचार गर्न समय!
एक मान्छे संग छोडेर कसरी राम्रो आफ्नो मर्यादा राख्न?
विवाह, सम्बन्ध विच्छेद र यसलाई को इन्कार लागि राम्रो कारण
अनुहार मा pores साँघुरो गर्न क्रीम। उपकरण र सफाई को लागि प्रक्रियाहरु, र अनुहार मा pores को साँघुरो
लक्षण, निदान र मानिसहरू मा testicular क्यान्सर को लक्षण। मानिसहरू मा testicular क्यान्सर को लक्षण के के हुन् र कसरी यो परिभाषित गर्ने?
जिब्रोको दुखेको टिप। विकृति कारणहरू
द्वन्द्व संकल्प प्रविधी
Ares होटल4*: तस्बिर, मूल्यहरू र समीक्षा
चाँडै Domodedovo प्राप्त गर्न केही तरिकाहरू
उलाना सर्गेनिको। उलाना Sergienko - कपडे। डिजाइनर उलेया सेर्गेनिको